Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Usomabhizinisi waseShayina eTonga ubika ngesimo sesiqhingi manje
Usomabhizinisi waseShayina u-Yu Hongtao useTonga. Ngesikhathi exoxa ne-CGTN, uthe uthuli lugcwele yonke indawo esiqhingini ngemuva kokuqhuma kwentaba-mlilo.
“Engikubonile kuze kube manje wonke umuntu ubambe iqhaza ezinhlelweni zokuhlenga izimo eziphuthumayo nezinhlekelele,” kusho u-Yu. “Cishe wonke umuntu ugqoke imaskhi. Umlotha wentabamlilo usemigwaqweni ngoba umlotha wathatha amahora ambalwa. Umhlabathi ugcwele umlotha okuhlanganisa uhlaza nezindlu zabantu.”
“Amanye amavolontiya abehlanza imigwaqo, kodwa abengakafiki emahlathini. Abantu basanda kulungisa imigwaqo,” usho kanje.
Mayelana nezimo zokuhlala, okuhlanganisa amanzi, ugesi nokudla eTonga, i-Yu izinto azikakabuyeli kwesijwayelekile, kodwa sekungcono kwezinye izindawo.
Uthe ugesi ubuyile ezindaweni eziningi kungakapheli ngisho usuku ukuqhuma kunqamuke ugesi. Futhi, ngemva kokuntwela kokusa, ngosuku lokuqhuma, wonke umuntu waphinde wathenga izimpahla.
“Mina ngokwami ​​ngagcina amanzi, ngagcina ukudla namanzi engeziwe,” esho.
“Sinezimpahla ezanele lapha. Awekho amanzi asemabhodleleni manje ezitolo ezinkulu, kodwa ezinye izinto zisatholakala.”
Imifino ayitholakali okwamanje. U-Yu uthe umngane wakhe osebenza kwezolimo wamtshela ukuthi abantu esiqhingini ngeke babe nemifino emisha isikhathi esingaphezu kwenyanga. Mayelana nezithelo, uthe, “Akukho okuningi esiqhingini, okokuqala, amakhabe kuphela. Kodwa nalokhu sekuyindlala manje.”
"Angicabangi ukuthi impilo isibuyele kwesijwayelekile," u-Yu etshela abe-CGTN.
Uthe iPhini likaNdunankulu selimemezele isimo esiphuthumayo, futhi abantu baseTongan bajoyina imizamo yokusiza ezinhlekeleleni futhi bakhuculule umlotha wentabamlilo emigwaqeni.
“Uma zingahlanzwa zizondiza zibuyele emoyeni uma izimoto zidlula, zihlale ophahleni,” usho kanje.
“Amanzi okuphuza eTonga aqhamuka ngqo emvuleni. Wonke umuzi unomshini wokuvuna amanzi emvula ophahleni lwawo, ngakho kufanele siqinisekise ukuthi wonke umlotha uyakhucululwa.”
Odokotela Abahlinza I-CHOP Bahlukanise Amawele Ahlangene AseKhaya Manje